4. Ian Draisey - BayWa r. e. NSC P...
Хуан Карлос Беллосо «The role of Te...
1995 ck atmufwdkbmvrSpwifI tywfpOfxkwfa0onf oice of BurmaV Published by Voice of Burma Information Group Issue No.792, DECENBER 12, 2010 APTO 502, 7-18-1 , Takinogawa , Kita-Ku, Tokyo 114-0023, JAPAN Tel/Fax: 81 3-3949-3919, E-mail: sayarkway@yahoo.com , koko@gol.com EkdifiHjcm;a&;ay:vpDokd@ a:atmifqef;pk=unfay;ykd@aom rdef@cGef; “ဒီနေ့မှာ အခုလို သင်တို့ကို နှုတ်ခွန်းချွေစကားမြွက်ကြားခွင့် မှာပဲလို့ ကျမဆန္ဒဖြစ်မိတယ်။”ရတာဟာ အင်မတန်မှ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ အကယ်၍များ “ဒီလ ၁၃ ရက်နေ့က ကျမ အထိန်းသိမ်းခံရာက ထွက်လာသင်တို့နဲ့အတူ ကျမ လူကိုယ်တိုင်လာပြီး ပြောဆိုခွင့်ရမယ်ဆိုရင် တဲ့အချိန်မှာ ကျမကိုယ်ကျမ ရုတ်တရက် ကမ္ဘာအသစ်တခုကို ရောက်ဒီထက်မက၀မ်းမြောက်စရာ ကောင်းမှာအမှန်ပဲ။ ကျမကို ကမ္ဘာထိပ် လာသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကျမဆီ လာရောက်ထောက်ခံအားတန်းအတွေးအခေါ် ပိုင်ရှင်တယောက်စာရင်းထဲမှာ ရွေးချယ်ဖေါ်ပြခြင်း ပေးပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်လာကာ ကျမတို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အရေးကိစ္စခံရတာကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမောက်မာခြင်းကင်းလျက် ၀မ်းမြောက် တွေကို ဆက်လက်ယုံကြည့်နေသူတွေအထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေကဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စု နှစ်နှစ်ခုစာကာလအတွင်း ကျမရဲ့ အလုပ်အတူလုပ်လာခဲ့ ကျမရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေထက် များစွာငယ်ဘ၀က အတွေးအမြင်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ရှုမြင်သုံးသပ်အဖြေရှာတဲ့ ရွယ် နုပျိုကြတဲ့ လူငယ်များစွာကို တွေ့ရပါတယ်။”အချိန်ကာလနဲ့ အကောင်အထည်ဖေါ်စရာတွေ လက်မလည်အောင် “မျိုးဆက်သစ်တွေအားလုံး ဒါမှမဟုတ် မျိုးဆက်သစ်များစွာလို့များလွန်းလို့ အတွေးအမြင်တွေကို တွေးတောကြံဆဖို့ အချိန်မပေး ဆိုနိုင်ပါတယ် ကျမတို့နဲ့အတူ လာရောက်ပူးပေါင်းကြတော့ နုပျိုသစ်နိုင်တဲ့ ကာလ နှစ်ခုကြားမှာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရပါတယ်။” လွင်တဲ့ ကမ္ဘာလေးတခုပါပဲ။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီလိုလာရောက် ကြတဲ့ “ဒီလို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရပေမဲ့လည်း အဲဒီကာလတွေအတွင်း လူငယ်တွေဟာ IT ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမှာ IT ပညာနှင့်ပတ်ကျမနဲ့အစဉ်မပြတ် အတူရှိနေတဲ့ အတွေးတခုကတော့ ဘယ်လိုအ သက်ပြီး ကျမထက်များစွာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြတာကို တွေ့ရတော့ခြေအနေမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိုးတက်မှုရှိဖို့ဆိုတာ ကျမတို့အားလုံး အတူ ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ကြီးပါပဲ။ ဒီအခြေအနေတွေ ကတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ် ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျမကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စေတယ်။ အားပေးနေပါတယ်၊ အားတက်ဒါဟာ နဂိုကတည်းက သူ့အလိုလို ရှိနေတဲ့ အတွေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စေခဲ့ပါတယ်။”ဒါဟာ လူသားတွေအတွက် ခွန်အားကို တိုးပွားစေဖို့၊ အချင်းချင်း အ “ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ IT နည်းပညာက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ပြန်အလှန် ကူညီမှုအတွက် တဦးဆီကတဦး အပြန်အလှန်သင်ယူလေ့ ဆက်သွယ်မှုကို ဖြစ်စေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုကလည်းမတူလာနိုင်ဖို့ လူသားမျိုးနွယ်တွေနဲ့အတူ ရှင်သန်လာတဲ့ အတွေးအခေါ် ကွဲပြားတဲ့ လူထုတွေနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ မျိုးဆက်တွေအကြား ဆက်ဆံလို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ဒီအတွေးအခေါ်ဟာ ဘယ်တော့မှ ဟောင်းနွမ်း ရေးမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။”ဆွေးမြေ့မသွားပါဘူး။ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ အပြောင်းအလဲတွေ များစွာနေရာ “အခုပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အကမ္ဘာထိပ် အတွေးယူလာတဲ့ အချိန်ကလဖြစ်တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ကာလအတွင်း ကျမ အခေါ်ရှင်တယောက်ရဲ့ စကားဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး။ ကျမပြောတွေးခဲ့တဲ့ အတွေးတွေကို သင်တို့နဲ့တွေ့ပြီး ပြောဖြစ်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်း pmrsufESm2okd h yl;aygif;aqmif&Gufzkd hppf jrefrmEkdifiHtoGiful; tar&dueftqifhjrifh a:atmifqef;pk-unf yifvkHnDvmcHonf etz. 2010 a&G; tpkd;&qkH;jzwf&r,fhtcsdef ajymif;a&; tm%mykdif t&m&Sd &efukefa&muf&Sd udk tdENd,oHtrwf}uD; tm%m,lzkd hr[kwf aumufyGJonf [efjy rkcsa&mufvmvdrfhr,f awG wm0efauszkd hvkd a:atmifqef;pk-unf awG hqHk aqG;aEG; pnf;vkH;a&;omjzpf[k a&G;aumufyGJjzpf[kqkd ESifhawG hrnf a:pkajymqkd pmrsufESm3pmrsufESm5pmrsufESm 18 pmrsufESm 10 pmrsufESm6pmrsufESm 12 DECEMBER 2, 200 Voice of Burma 792 Page
21 mpk yifvHknDvmcHqDodk@ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြေအနေများအပြောင်းအလဲဖြစ်နေသည်။ မြန်မာလူမှုအသိုင်း VOB အ၀ိုင်းအတွင်း ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းရှိ ပြည်သူပြည်သားများအကြား ဆက်သွယ်မှု သွားလာမှု ပိုမိုများပြားတိုးတက်လာခြင်း၊ နိုင်ငံတကာသို့ဆက်သွယ်သွားလာရောင်း ၀ယ်မှုများတရှိန်ထိုးတိုးတက်မြင့်မာလာနေခြင်းကြောင့် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းပြောင်းလဲလာနေခြင်း tm ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် ရလဒ်မှာ လူအများ၏ သဘောထားအမြင် အတွေးအခေါ် အယူအဆများ ပြောင်းလဲလာနေခြင်းဖြစ်သည်။ abmf နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းများဖြစ်နေသည်ဆိုသည့်အချက်ကို မည်သူမျှအငြင်းမပွားနိုင်ကြ ပေ။ ထိုအကျပ်အတည်းများကို ဖြေရှင်းရေးအတွက်ချဉ်းကပ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက် သော အငြင်းပွားမှုများဖြစ်နေသည်။ ပြောင်းလဲနေသော ခေတ်ကာလအခြေအနေများကြောင့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းဖြေရှင်းရေးနည်းလမ်းများကို အသေကိုင်စွဲထားမသင့်တော့ပေ။ ကာလ ဒေသပယောဂ အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အင်အားစု၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အား လုံး စုပေါင်းညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမည့် နည်းလမ်းမျိုးကို ဦးတည်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဦးတည် နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံအကျဆုံးမှာ ယခုလတ်တလော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အတွင်း ကျယ် ကျယ် ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာနေသည့်အယူအဆ တွေးတောချက်ဖြစ်သော ဒုတိယပင်လုံညီလာခံဟုပြောဆိုနေကြသည့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံဖြစ်သည်။ ၂၀ ရာစုအတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သောပင်လုံညီလာခံတွင် ထိုစဉ်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေအခင်းအကျင်းများအရ တိုင်းရင်းသားတချို့ပါဝင်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးရရှိရန် အခြေခံလမ်းခင်းနိုင်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးနောက် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံဟု ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုနေသော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင်အဓိကကျသော မဖြစ်မနေပါဝင်ရမည့်အင်အားစုအားလုံးပါဝင်သည့် ညီလာခံတရပ်ကျင်းပရန် လို အပ်သည်။ထိုညီလာခံသည် အနာဂတ်တွင် စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက် အခြေခံလမ်းခင်းနိုင်ရန်ဖြစ်ရမည်။ ထိုညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုင်စွဲထားသူများ၊ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်များ၊တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ စုပေါင်းကြိုးပမ်းရမည်။ ထို သုံးဦးသုံးဖလှယ်စလုံးပါဝင်မှသာ အနာဂတ်နိုင်ငံသစ်အတွက် အာမခံချက်များရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တဖက်ဖက်က ချွတ်ယွင်းအားနည်းနေလျှင် အောင်မြင်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းနေမည်။ အပြန်အလှန်ကူညီမှုများဖြင့် ချွတ်ယွင်းအားနည်းမှုများကို ပပျောက်စေရန်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအင်အားစု သုံးရပ်စလုံးအားကောင်းရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည့်တာဝန်ရှိသည်။ ထိုအချက်ကိုလက်ကိုင်ပြုကာ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တခုအဖြစ် လုပ်ကိုင်လှုပ်ရှားရန် တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ပေသည်။ rsufESmzkH;rSနိုင်တာကတော့ ကျမဟာ သင်တို့ဆီက သင်ကြားမှုကို ခံယူဖို့၊ သင်ယူ “ပြောခဲ့တာတွေက အတွေးအခေါ်သမားတယောက်ရဲ့ အတွေးလေ့လာဖို့၊ အတွေးအခေါ် အသစ်တွေဆီကို လူငယ်တွေဆီမှ သင်ယူ အမြင်အနေနဲ့ သင်တို့အား ကျမလှစ်ဟ ဖေါ်ပြခြင်းတော့မဟုတ်ပါ၊ဖို့၊ ကျမအချုပ်ကျနေစဉ်ကာလအတွင်း လွတ်လပ်တဲ့ကမ္ဘာမှာ ဖြတ် ကမ္ဘာလောကနဲ့ နှစပေါင်းများစွာ ကင်းကွာနေပြီး အခုမှ ပြင်ပလောကကိုသန်းခဲ့တဲ့ သူတွေဆီက ဘာတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ လေ့လာသင် ရောက်ရှိလာသူတယောက်က သင်တို့နဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းပြီးယူပြီး အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကနေ တဖန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကာသင် သင်တို့ရဲ့ အထောက်အပံ့၊ အကူအညီ၊ အကြံအဥာဏ်နှင့်မိတ်ဆွေအယူလေ့လာဖို့ ကျမအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ကို လိုအပ်နေတဲ့ သူတယောက်က တွေးတဲ့ အတွေးအမြင်မျှသာကျမတို့ဟာ အဖန်တလဲလဲ ပြန်လည်တွေးတော ဆင်ခြင်သုံး သပ်နေရ ဖြစ်ပါတယ်။”မှာဖြစ်တယ်။ တွေးတောဆင်ခြင်ဆန်းစစ်မှုဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ဆုံး “ဒါဟာ ကမ္ဘာထိပ်တန်း အတွေးအခေါ်သမားတယောက်ရဲ့ခန်းသွားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အဆုံးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကောက် စကား ဟုတ်မဟုတ်မသိမေပဲ့ ကျမပြောခဲ့တာ အားလုံးက ကျမရဲ့နှလုံးချက်ရယ်လို့လည်း ဘယ်တော့မှ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ ဒါသည်ပင် သားထဲကလာတာဖြစ်ပြီး ဒီအပေါ်မှာ သင်တို့က ကြင်နာစွာနဲ့ ရှုမြင်ကြကျမတို့ရဲ့နှလုံး၊ စိတ်ဝမ်းထဲမှာ ဘက်ပေါင်းစုံနဲ့ ရှေ့ဆက် တွေးတော လိမ့်မယ်လို့ ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။ များစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကာ သွားနေရမည့် လူသားသဘာဝရဲ့ အလှတရားဖြစ်ပါတယ်။”Page2Voice of Burma 792 DECEMBER 2, 200
yl;aygif;aqmifGufzkd@ ppftpkd;qkH;jzwfr,fh tcsdef rkcsamufvmvdrfhr,fMizzima / DZifbm 1 ? ? မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် Mizzima ? ? ပထမပင်လုံညီလာခံကို စစ်တပ်က တိုင်းပြည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူစည်ကားလှသော သူ၏ ပါတီ အမျိုးသား ပြိုကွဲရေးအတွက် ပထမခြေလှမ်းလို့ ယူဆခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းတွင် မဇ္ဈိမသတင်းထောက် Thea Forbes က a:atmifqef;pk-unf ? ? ပထမပင်လုံညီလာခံဟာ တိုင်းပြည်နိုဝင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်တွင် လူချင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ပြိုကွဲရေးအတွက် ပထမခြေလှမ်းလို့စစ်တပ်က ပြောခဲ့ဖူးတယ်လို့ကျမ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ မထင်ပါဘူး။ ရှင်ဘာလို့ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးတယ်ဆိုတာ ကျမသိချင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပါတီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမှ လိုက်တာ။သည် စစ်အစိုးရ စီမံကိန်းများပေါ်အမြင်တို့ကို မေးမြန်းထားသည်။ Mizzima ? ? ကျမထင်တာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကကိုယ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်က နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက် ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အခွင့်အရေးအတွက် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားကြတာ၊ ဒီတော့လာခဲ့ပြီးနောက် မဇ္ဈိမက ဒုတိယအကြိမ် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။ မူရင်း နိုင်ငံတော်က သူတို့ကိုမြင်လာတာက -အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် မေးဖြေထားသည်ကို ဘာသာပြန်ထားပါသည်။ a:atmifqef;pk-unf ? ? ပထမ ပင်လုံညီလာခံရဲ့ ရည်ရွယ်Mizzima ? ? နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က လူထုကို မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ ချက်က တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနေရာမှာရှင့်အဖေရဲ့ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီး ချိတ်ထားတာတွေ့ပါတယ်။ အားလုံးအတူတကွ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာဒီတော့ လွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်း ရှင့်အဖေနဲ့ မျိုးရိုးဆက်နွယ်မှု ရှိနေ ဘယ်သူမှ သဘောထား ကွဲပြားမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။တာဟာ ရှင့်အတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ Mizzima ? ? ခုလို ဒုတိယပင်လုံညီလာခံကျင်းပပြီး ညီညွတ်a:atmifqef;pk-unf ? ? ဒါသိပ်အရေးကြီးပါတယ်၊ ဒါကျမနဲ့ ရေးရအောင်လုပ်တဲ့အခါ စစ်တပ်က ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျမအဖေ မျိုးရိုးဆက်နွယ်မှုရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုမစဉ်းစားပါနဲ့၊ ဒါ ထင်ပါသလား။အဖေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားရှားပါး နေတဲ့ a:atmifqef;pk-unf ? ? ညီညွတ်ရေးအတွက်ပထမခြေလှမ်းခုအချိန်မှာ လူတွေက သူ့အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိနေကြတာက အဓိကပါ။ က သူများပြောတာ နားထောင်ဖို့ပါ။ မြန်မာပြည်လို တိုင်းရင်းသားလူဒါကြောင့လတွေက ကျမအဖေကို သိပချစ်ခင်ကြတယ်။ သူသာအသက်ူ်မျိုးပေါင်းစုံ စုစည်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာ အထူးသဖြင့် အာဏာရှိနေရှင်နေရင်သူတို့မှီခိုအားထားနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်လို့ထင်ကြတယ်။ တဲ့သူတွေအနေနဲ့ သူတို့အသံတွေကို နားထောင်ဖို့လိုတယ်။ ဒီလိုMizzima ? ? ရှင်နဲ့ရှင်ရဲ့ပါတီက ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံခေါ်ဖို့ နားထောင်မှ သူတို့ဘာလိုချင်တယ်၊ သူတို့မျှော်မှန်းချက်တွေ ကဘာ၊ သူပြောထားတယ်နော်။ တို့မျှော်လင့်ချက်တွေကဘာ၊ သူတို့ဘာကို စိုးရိမ်ကြတယ်ဆိုတာတွေa:atmifqef;pk-unf ? ? မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျမတို့က ဒါကိုလုပ်ဖို့ သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနားလည်လာမှ မတူကွဲပြားခြင်းတွေရဲ့တာဝန်ယူလိုက်တာပါ။ ဒါကိုစပြီး ဆောင်ရွက်တာ တိုင်းရင်းသားပါတီ ညီညွတ်ရေး ဆိုတာအတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်ကိုချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တွေပါ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခြေလှမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ Mizzima ? ? ဒီလဆန်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုတို့ပါတီက ဒါကိုထောက်ခံခဲ့တာသာဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်နဲ့ရှင်ရဲ့ပါတီက အပြင်းအထန် ရှုတ်ချကန့်ကွက်ခဲ့တယ်နော်။ ဒီရွေးMizzima ? ? ဒီလို ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပရေးမှာ စစ် ကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲ အနိုင်ရခဲ့တဲ့တပ်ပါဝင်မှု ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ မြန်မာပြည် ပါတီတွေနဲ့ ပါတီဝင်တွေကို ရှင်ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။ ဒီချုပ်ကလို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ စုစည်းနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာ အထူး `အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲ´ လို့ပြောထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာသဖြင့် အာဏာရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သူတို့အသံတွေကို နားထောင် သူတို့အနိုင်ရထားတဲ့ အမတ်နေရာအချို့ဟာ အလုပ်ဖြစ်မယ့် အလားဖို့လိုတယ်။ အလာရှိမယ်လို့ ရှင်ထင်ပါသလား။a:atmifqef;pk-unf ? ? ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံကျင်းပရတဲ့ a:atmifqef;pk-unf ? ? ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ၊အကြောင်းက စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကို ထူထောင်ဖို့ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီတွေလို့ ရှင်ပြောတော့ ဒီလိုပါတီဒါကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာတတ်နိုင်သမျှ လူများများပါရေးဆိုတာ တွေက အများကြီးပါ၊ ဒီတော့သူတို့မှာလဲ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ် သက်လို့ကျမတို့ ရည်မှန်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက,က မတူညီတဲ့ သဘောထားတွေ ရှိကြမှာပါ။ ဒါကိုတော့ ရှင်သူတို့ကိုပဲစစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကို ထူထောင်ဖို့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ အ မေးရမယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ကျမတို့ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်တွင်းက မတူကွဲပြားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအကြားမှာညီညွတ် မှောက်ခဲ့တာက ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အယုံအကြည်မရှိရေးရအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ပါ။ လို့ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေဟာ လွတ်လပ်မျှတတယ်လို့ ကျမMizzima ? ? ဒီလိုဆို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံး တန်းတူ တို့မထင်လို့ပါ။ ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ရဲဘော်တွေကိုမျက်ညီမျှမှုရနိုင်မယ့် အနာဂတ်မြန်မာပြည် ထူထောင်နိုင်မယ့် အချိန်ကိုမျှော် ကွယ်ပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတယ်ဆိုတာမျိုး ကျမတို့မလုပ်မှန်းကြည့်နိုင်ပါသလား။ နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်မပြိုင်ဖို့ ကျမတို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့a:atmifqef;pk-unf ? ? မျှော်မှန်းနိုင်တာပေါ့၊ ဒါကျမတို့ သွား တာပါ။ သူတို့မှာလဲ သူတို့အကြောင်းနဲ့ သူတို့ရှိမှာပေါ့။ ကျမတို့ကလဲနေတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပဲ။ pmrsufESm4okd hDECEMBER 2, 200 Voice of Burma 792 Page
pmrsufESm3rSဒါတွေကြောင့်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်မပြိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ရွေး စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်း လူတွေကပြောကြပါတယ်။ သူတို့လုပ်ခဲ့တာကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဒီပွဲမှာ သူတို့အောင် တွေအတွက် ပေးဆပ်ရမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေလဲ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမြင်တယ် မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ သူတို့ဖာသာပဲ ထုတ်ဖော်ပြောရမှာ မဲ့ ဒါတွေက ရော်ရမ်းမှန်းဆပြောတာတွေပါ။ ခုလိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်ပဲ တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပြီး စကားပြောဖို့လိုတာပေါ့။Mizzima ? ? နောက်တကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပ ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်တမ်း ဘာတွေလိုချင်တယ်ဆိုတာပေးဖို့တောင်းဆိုနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး ဒီချုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသ တွေ့ဆုံ ရှာဖွေဖို့လိုတာပေါ့။လား။ Mizzima ? ? ဒီလိုဆို စစ်တပ်နဲ့ ဒီချုပ်ကြားမှာ အပြန်အလှန်a:atmifqef;pk-unf ? ? ကျမတို့က နောက်တကြိမ်ရွေးကောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဟာ ဒီအချိန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးလို့ ရှင်ပြောချင်ပွဲအသစ်ပြန်လည်ကျင်းပပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို တာလား။ရွေးကောက်ပွဲအသစ် ပြန်လည်ကျင်းပပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုဖို့ a:atmifqef;pk-unf ? ?ဟုတ်တာပေါ့၊ အတူတကွ လက်တွဲလုပ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာလဲ ကျမတို့ဘယ်တုံးကမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒီမေး ဆောင်ချင်တဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်အနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက် တဖက်ခွန်းကတော့ တော်တော့်ကို အချိန်မတန်သေးတဲ့ မေးခွန်းပဲလို့ကျမ ဖက်ကစပြီးစကားပြောဖို့ဟာ အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စမဖြစ်သင့်ဘူးလား။ထင်ပါတယ်။ Mizzima ? ? ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ဒါကိုကော တကယ်လက်တွေ့Mizzima ? ? ပညာရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကျတယ်လို့ ရှင်ထင်ပါသလား။လုပ်ငန်းအတွက် အလွန်အဓိကကျတဲ့လုပ်ငန်းလို့ နိုဝင်ဘာ ၁၄ က a:atmifqef;pk-unf ? ? ဘာလို့ လက်တွေ့မကျရမှာလဲ၊ လူလူထုကို မိန့်ခွန်းပြောတဲ့နေရာမှာ ရှင် ထည့်ပြောသွားတယ်။ ဒီပညာ တွေက ပြောကြတယ်၊ ရှင်တို့ဘက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ဖို့ပြောရေးလို လုပ်ငန်းမျိုးဟာ ရှင်နဲ့ရှင်တို့ပါတီအတွက် အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းလုပ် လာတာကြာပြီ။ နအဖဘက်ကဘာမှ မတုံ့ပြန်ဘူး။ ဒါကို ခုအထိ ပြောနိုင်မယ့် စင်မြင့်တရပ်လို့ ရှင်ထင်ပါသလား။ နေတုန်းပဲလားလို့ ပြောကြတယ်။ လူသားမျိုးနွယ် တရပ်အနေနဲ့ ဘာမှa:atmifqef;pk-unf ? ? လူထုအတွက် တကယ်ကိုအကျိုး တိုး တက်မှုမရှိဘူးလို့ လူတွေစိတ်ထဲခံစားမိပါသလား။ ဒါဆို လူသားရဲ့ရှိမယ့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တခြားဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့ ဘယ်သူမ အစကို ကျမတို့ပြန်သွားကြရလိမ့်မယ်။ ဒီတုန်းက လူဝံတွေက ပြောမှာဆို လူတိုင်းနဲ့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါတယ်။ ပေါ့။ မင်းတို့က ဘာလို့ခြေနှစ်ချောင်းပေါ် မတ်မတ်ရပ်ပြီး လမ်းMizzima ? ? စစ်အစိးရက ဒီချုပ်နအတူ လက်တွဲလပဆောင်ဖိုဲု့ု့် လျှောက်ဖို့ကြိုးစားနေရတာလဲလို့။ မင်းတို့ဘယ်တော့မှ ဒီလိုဖြစ်မှာအဆင်သင့်ဖြစ်မယ့် အချိန်ကို ရှင်မျှော်မှန်းကြည့်လို့ ရပါသလား။ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောမှာပေါ့။ ခုကြည့် ကျမတို့လူသားတွေ မတ်မတ်ရပ်a:atmifqef;pk-unf ? ? ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အင် နိုင်နေပြီလေ။အားစုတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ စစ်အစိုးရဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန် မုချ Mizzima ? ? ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်၊ ဒီနေ့ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ မှာမြန်မာလူငယ်တွေ ဒီချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးကို ချဉ်းကပ်ပုံအပေါ် ရှင်ဘယ်Mizzima ? ? မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လိုခံစားရပါသလဲ။အထူးကိုယ်စားလှယ်က မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု a:atmifqef;pk-unf ? ? လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ကထက်စာရင် လူငယ်တွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်း ဖို့ တောင်း တွေ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်လာတာကိုဆိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင့်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်အပေါ် ကျမကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်ရပါတယ်။ အပြောင်းအလဲအတွက် လုပ်ကိုင်မှာ ကျမတို့သိပ်မရှင်းဘူး။ ဒီလိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့ဖို့ ရှင်က တဲ့နေရာမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာ ဒီလူမလိုလားဘူးလို့ပြောတာဟာ မျှတမှု ရှိပါ့မလား။ ငယ်တွေကောင်းကောင်း သဘောပေါက်နေတယ်လို့ ကျမတော့ထင်a:atmifqef;pk-unf ? ? ကျမ ဒါမျိုးတခုမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မပါဘဲ ဘေးကနေ အသာထိုင်စောင့်ကြည့်နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာမှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးကို ရှင်ပြောနေတာ နေပြီး အပြောင်းအလဲတရပ် ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ သူတို့မထင်ထင်ပါတယ်။ ကျမအဲဒီမှာ ပြောခဲ့တာက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ရုံးတင် တော့ပါဘူး။ ဒါသိပ်ကို ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ အစစ်ဆေးဖို့ ကျမတခါမှ မတောင်းဆိုခဲ့ဖူးဘူးလို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ပြောင်းအလဲပါ။ဟိုဆေးကင်တားနားရဲ့ အဆိုပြုတင်ပြချက်တွေနဲ့ ဘာမှ မပတ်သက် Mizzima ? ? မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်၊ အင်တာနက်ပါဘူး။ ဒါလုံးလုံးကွဲပြားခြားနားတဲ့ သီးသန့်ကိစ္စ နှစ်ခုပါ။ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ကြိုးပမ်းမှုတွေ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လာလိမ့်မMizzima ? ? အနာဂတ်မြန်မာပြည်မှာ တာဝန်ခံတဲ့စနစ်ကို ယ်လို့ကော ရှင်ထင်ပါသလား။ဘယ်လို သွတ်သွင်းနိုင်မယ်လို့ ရှင်ထင်ပါသလဲ။a:atmifqef;pk-unf ? ? အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာ ပွင့်လင်းမှုရှဖနဲ့ တာဝန်ခမရဖကို ကျမတို့ အမြဲတမ်းပြောနေ တောင်းဆိနေခဲတာပါ။ိှုှိံ့ို့ အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းဆိုတာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့နဲ့တာဝန် qufvufazmfjyygrnfခံမှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကျမတို့ ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စတချို့ပါ။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတရပ်တက်လာရင် သူတို့ကို အရေးယူမှာလားလို့ စစ်တပ်ကPage Voice of Burma 792 DECEMBER 2, 200
jrefrmEkdifiHtoGiful;ajymif;a; tm%mykdifawG wm0efauszkd@vkdVOA / DZifbm6? ? မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲဟာ နိုင်ငံတကာ ပါ။မျှော်လင့်ထားတာနဲ့ အတော်ကို အလှမ်းဝေးတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ နိုင်ငံဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Ban Ki-moon က ပြောလိုက် ရေး ပါတီတွေ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အဓိကထားပါတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အ ပြီးဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ မစ္စတာနမ်ဘီးယားက မြန်မာနိုင်ငံကမထွက်ပြင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တော်တော် ခွာခင်ကလည်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့လာမယ့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးများများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မစ္စတာနမ်ဘီးယားနဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန် အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံအပြီးမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန် မွန်းနဲ့ မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ သံတမန်တွေနဲ့ ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့တာကီမွန်းက အခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာနမ်ဘီးယားဟာ တွေကို မစ္စတာ မာတင်နက်စာကီးက အခုလို ဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ခရီးစဉ်အကြောင်းကို တနင်္လာနေ့က “အနာဂတ်ကို မျှော်မှန်းပြီး ကျနော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံ အာဏာမရှင်းပြခင်မှာ မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအဖွဲ့ကို တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါ ပိုင်တွေကို ဆက်လက်ပြီး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေဖို့ လိုအပ်နေတာကတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဦးရော်နီညိမ်းက တင်ပြပေး ထားပါတယ်။ တော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ ကိစ္စမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဒီနှစ်ဆန်းကမှ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းရဲ့ ရှိဖို့နဲ့ အရေးပါသူတွေအားလုံးပါဝင်ရေး ပါပဲလို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ Mr. Vijay ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့် ၂ လတာ ကာလဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာNambiar ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် သိပ်ကို အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပါလို့လည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်က မြန်မာ့က ၂ ရက်ကြာခရီး သွားရောက်ခဲ့ပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် တယ်။တွေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ “ဒီကာလမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ အဆုံးအနိုင်ငံရေးပါတီ တချို့ရဲ့ ခေါင်း ဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဖြတ်ပေးမယ့်လမ်းကြောင်းသစ် ပေါ်ထွက်လာမယ့် အလားအလာရှိနေဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တော့ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ သလို နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီအပြောင်းအလဲကို လက်ခံမယ်၊လက်မ အခုအခါမှာ ကုလသမဂ္ဂကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ခံဘူး သုံးသပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ပြောသွားပါနမ်ဘီးယားရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက် နေ့ တယ်။ ဒီကာလမှာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဟာ တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းမနက်ပိုင်းမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြန်မာ့မိတ် အတိအကျ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနေအ ထဆွေများအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ သံတမန်တွေကိုားမှာရှိနေသင့်တယ်လို့လည်း မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက ပြောကြားသွားခဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ် ကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုအ တွင်း ပါတယ်။”ရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းနဲ့ မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အဖွဲ့ဝင်သံတမန် တွေ မစ္စတာနမ်ဘီးယားဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ ပြောရေး ခင်သွားရောက်ဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မြန်မာစစ်အစိုးဆိုခွင့်ရှိသူ တဦးဖြစ်တဲ့ မာတင် နက်စာကီးက သတင်းထောက် တွေကို ရ ကတော့ သူ့ကို ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်လာခွင့် မပြုခဲ့တဲ့ အ တွက်အခုလို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးကို ဆွေးနွေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လက စင် ကာပူ၊ “ဒီနေ့မနက်မှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာ မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေကို အရင် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့အဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မစ္စတာ နမ်ဘီးယားရဲ့မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကတော့ မစ္စတာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အရေးမှာ နမ်ဘီးယားရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက်သူ့ရဲ့ အထူးသံတမန်အနေနဲ့ မစ္စတာနမ်ဘီးယား လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ဘောင် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းက အပေးအယူ အတိုင်းအတာကို အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ရှင်းပြ ဟာ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကန့်အသတ်တွေ ရှိနေပေမဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို လေးစားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကတော့ နိုင်ငံတ မစ္စတာနမ်ဘီးယားဟာ ညနေပိုင်းမှာတော့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံကာ မိသားစုက မျှော်လင့်ထားတဲ့ အဆင့်အတန်းထက် အလွန်ပဲ နိမ့်ကျ ရေးကောင်စီမှာ သူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံစာခဲ့တာကို သူ့အနေနဲ့ ၀မ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်လို့အတွင်း တင်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေးမှူးချုပ်က မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ အဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တွေကို ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ မစ္စတာနမ်ဘီးယား၊ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။” ဘန်ကီမွန်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မြန်မာ့မိတ်ဆွေများ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့က နမ်ဘီးယားဟာ သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် အတွင်းမှာ ၂၀၁၀ တော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ရွေးကောက်ပွဲအပါအ၀င် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊နိုင်ငံရေး တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ သြစတြေးလျား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ရုရှား၊အကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးရေးကိစ္စတွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူ၊ ဗီယက်နမ်၊ ပြင်သစ်၊ နော်ဝေ၊ ပေါ်တူဂီ စတဲ့နိုင်ငံတွေ ဖြစ်အပါအ၀င် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တာ ပါတယ်။DECEMBER 2, 200 Voice of Burma 792 Page
tardueftqifhjrifhtmSd efukefamufSd a:atmifqef;pk=unfESifhawG@rnfRFA / dZifbm7? ?အမေရိကန်အစိုးရ အဆင့်မြင့်အရာရှိတ ဦးဖြစ် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတယ်၊ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကတဲ့ Joseph Yun ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက် ဒီကနေ့ ထိုင်းလေ ကြောင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပါတီသဘောထားကိုတော့ သူတို့ကိုကျွန်တော် ပြောမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီး ခရီးစဉ်အတွင်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ်က လိုက်တယ်လေ။”မကြာခင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုဘယ်ငြိမ်း ချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ် အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အမေရိကန် ဒုတိယလက်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အစိုးရဝန်ကြီးတဦးနဲ့ ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော် ထာက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာယွန်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အေမတ်သစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရအရာရှိတဦးက ဒီ နအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်မြောက်ပြီးချိန် အငြင်းပွားစရာ ရွေးကောက်ဇင်ဘာ ၇ ရက် ဒီကနေ့ အတည်ပြုပြောပါတယ်။ ပွဲအပြီး တလအကြာမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေလေ့လာဖို့ လာ မစ္စတာယွန်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေဦး ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF၊ ဦးသုဝေ ဦး သူ့အနေနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်ဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ - မြန်မာ စတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့ ဒီ ကောင်းမွန်လာရေး၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး ချွင်းချက်မရှိကနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ လွှတ်ပေးရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီ ဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ကြိုတင်မဲ အင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့တွေ့ဆုံတွေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဆွေးနွေးမှုတွေ စတင်နိုင်ရေးတို့အတွက် စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းပြောအနောက်နိုင်ငံတွေက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ပြန်စဉ်းစားဖို့ ဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောခွင့်ရပုNDF က တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ NDF ပါတီက ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက ဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ပြောပါတယ်။ ဒါ့ပြင် သူဟာ အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် “သူကလာတာက ဒီက အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအတွက် ပေးအပ်နေတဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေး လုပ်ငန်းတွေကိုလာတယ်လို့ပဲ ယူဆတယ်လေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမေရိကန် လည်း လေ့လာသုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်အစိုးရရဲ့သဘောထားပေါ်လစီတွေ ဘာမှ ကျွန်တော်တို့ကို ထူးထူးခြား ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခြားပြောသွားတာမရှိပါဘူး။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကလည်းပဲ oseph Yun ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် သောကြာနေ့မှာ မြန်မာ့အားလုံး သိပြီးသားကိစ္စဖြစ်နေပြီလေ။ ပြောတော့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ။ ဒါကသိပ်ပြီးတော့ အထူး သူတို့အနေနဲ့လည်းထူးထူးခြားခြားလို့ သ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ၊ CRPP ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ဘောထားပုံ မရပါဘူး။” က်ာမတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့ NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦး “သူတို့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ ဒီ sanction ဆိုတာဟာ ဒီ ကိစ္စနဲ့ ဉာဏ်ဝင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။ athpfa0emSifawGtwGuf HyHkaiGSmyGJ e,ll;a,mufwGif usif;yRFA / dZifbm6? ?မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက HIV/AIDS ရောဂါဝေဒ AIDS ဝေဒနာသည်ရှင်တွေက သူများနိုင်ငံနဲ့မတူဘူးခင်ဗျ။ ပိုပြီးတော့နာခံစားနေရသူတွေအတွက် ရံပုံငွေရှာဖွေပွဲတပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လို့ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်။”တနင်္ဂနွေနေ့လည်ပိုင်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ အဲဒီပွဲကို သာသနာ့ဦးသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ဟန်းတော်များအဖွဲ့ IBMO က ကမကထပြုကျင်းပခဲ့ပြီး အဖွဲ့အစည်း ရံပုံငွေရှာပွဲမှာ စတုဒီသာရောင်းချအလှူခံရုံသာမက တေးဂီတ အသီးသီးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖျော်ဖြေပွဲလည်း ပါဝင်ခဲ့ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံကလာရောက်တဲ့အဆိုတော် အလားတူ တနင်္ဂနွေနေ့လည်က ရန်ကုန်မြို့ ပြည်တွင်းသ တင်း- ရောသမမွှေ သားစိုးလည်း ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ထောက်လူငယ် အမျိုးသမီး အမျိုးသား ၂၀ ကျော်ကလည်းအမျိုးHIV/AIDS ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေကိုကူညီချင်တဲ့အတွက် ဒီပွဲကို သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က မဖြူဖြူသင်းဦးစီးပြီး HIV/AIDSလာရောက်ကူညီတာဖြစ်ကြောင်း အဆိုတော်သားစိုးက RFA ကို ပြော ဝေဒနာရှင်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဂေဟာကို သွားရောက်ပါတယ်။ လှူဒါန်း အားပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ လှူဒါန်းအားပေးခဲ့တဲ့ အ “ဟုတ်ကဲ့၊ အဓိကကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တွက် ဝေဒနာရှင်တွေက ပျော်မြူးနေကြတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်HIV နဲ့ AIDS ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဖျော်ဖြေပေး လှူဒါန်းရာမှာပါဝင်တဲ့ လူငယ်သတင်းထောက်တဦးကပြောပါတယ်။တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားချင်း စာနာတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ “သတင်းသမားတွေစုစုစည်းစည်းနဲ့သွားကြတော့ ဒီ လူနာတွေအကုန်လုံးကို ကူညီချင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့လုပ် ကလည်း သူတို့တွေလည်းပျော်ကြတာပေါ့နော်။ ပျော်ကြတော့သူတို့တဲ့ပွဲတခုပါ။ ကျွန်တော် သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီး သွားရောက်ဖျော်ဖြေ တွေက ဒါကူညီဖေးမမှုလိုအပ်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေပေးတာပါ။ အကူအညီတခုခုရအောင်ပေါ့။ ရန်ကုန်မှာလည်း ဒီပွဲတွေ သွားတယ် အားပေးစကားတွေပြောတယ်၊ ပြီးတော့ငွေလှူတယ်ပေါ့လုပ်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ HIV နဲ့ နော်။ သူတို့နဲ့တရင်းတနှီးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေထိုင်ခဲ့တယ်။”Page Voice of Burma 792 DECEMBER 2, 200
ajrðr‡yfrkdif;pmcsKyf tarduefvufrSwfxkd;a; a:atmifpkqef;=unfwkdufwGef;VOA / DZifbm4? ? လူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းတားဆီး “ဒါကြောင်မို့လဲ မြေမြှုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ထွက်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ လက်မှတ် ပြောဆိုလေ့ရှိတဲ့ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးက ဒီမြေမြှုပ်မိုင်းကာကွယ်ရေးထိုးထောက်ခံဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကို နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်း တားဆီးရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးလာဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါ။ ဒါမှရေးဆုရှင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါ လည်း မြေမြှုပ်မိုင်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအအ၀င် နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ၁၆ ဦးတို့က တိုက် တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ပေါ်မှာ ပြည်သူတွေအတွက် သိပ်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းသုံးစွဲမှုအပြည့်အစုံကို မခင်ဖြူထွေးကတင်ပြထားပါတယ်။ တွေရပ်ဖို့ ပိုပြီးဖိအားပေးနိုင်မှာဖြစ်သလို ကမ္ဘာတ၀န်း တခြားဒေသ သမ္မတအိုဘားမားထံ ပေးပို့ခဲ့တဲ့ တိုက်တွန်းလွှာကိုတော့ အမျိုး တွေမှာပါ အပြစ်မဲ့အရပ်သား သေကျေပျက်စီးမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းတားသမီးနိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်များအဖွဲ့ Nobel Wo men’s Initiative ဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”က ဦးဆောင်ရေးသား ပေးပို့ခဲ့တာပါ။ အစကနဦးမှာတော့တောင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ စစ်ရေးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအပါအအာဖရိက ဘုန်းတော်ကြီးဒက်စ်မွန်တူးတူး၊ မြေမြှုပ်မိုင်းတားဆီးကာ ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၆ နိုင်ငံက လက်မှတ်ရေးထိုး ထောက်ခံထားပြီးဖြစ်တဲ့ကွယ်ရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ အဓိကကြိုးပမ်းရာကနေ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်း ဒီမြေမြှုပ်မိုင်းတားဆီးရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းရေးဆုချီးမြင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ဂျိုဒီဝီလျံတို့အပါအ၀င်နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အားဖြင့် ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ ရပ်တည်တယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ဂုဏ်၁၅ ဦးက ဒီစာချုပ် ချုပ်ဆခတဲ့ ၁၀ နှစြ် ပည့် အထိမးအမှတ် နေ့ နိဝင်ဘာလို့ဲ်ု သိက္ခာကို ဖော်ပြရာရောက်သလို ကမ္ဘာတ၀န်း အပြစ်မဲ့အရပ်သား၃၀ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားထံ တိုက်တွန်းစာရေး သေကျေပျက်စီးမှုတွေကို ၀ိုင်းဝန်းတားဆီးနိုင်မှာမို့ ကမ္ဘာကြီး တခုလုံးပို့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကမှနေအိမ်အ ကျယ်ချုပ်ကနေပြန် အတွက်ပါ အကျိုးရှိမယ့် လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း အမျိုးသမီး နိုဘဲလ်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ အခုအခါ ပါဝင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်များအဖွဲ့ Nobel Women’s Initiative ရဲ့ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Nobel Women’s Initiative က ဆက်သွယ် သွယ်ရေးတာဝန်ခံ Rachel Vincent က ပြောပါတယ်။ရေးတာဝန်ခံ Rachel Vincent က ပြောပြပါတယ်။ လူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ မြေမြှုပ်မိုင်း တားဆီးရေးစာချုပ် လက် “အခုတိုက်တွန်းစာကို သမ္မတအိုဘားမားဆီ ပို့ပြီးတဲ့နောက် မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့ နိုင်ငံ ၃၉ နိုင်ငံ ထဲမှာ အမေရိကန်၊တရုတ်၊ပိုင်းမှာ ဘုန်းတော်ကြီးဒက်စ်မွန်တူးတူးရော၊ ဂျိုဒီဝီလျံရော ဒေါ်အောင် အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံလည်းအပါဆန်းစုကြည်နဲ့ ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ် စကားပြောခွင့် ရခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အစိုးရကိုယ်ဆက်သွယ်ပြောခွင့်ရတုန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီတိုက်တွန်း တိုင်က လူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့ တခုတည်းစာကို ထောက်ခံတဲ့အကြောင်းနဲ့ သူ့နာမည်ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးဖို့ပြော သောနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက မြေမြှုပ်မိုင်းတွေကို အခုထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးနေ တုန်းဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အရပ်သားပြည်သူတွေအတွက် ပိုပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ ဒီမြေမြှုပ်မိုင်းတွေ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားဖို့အလို Akdvfoef;a$ ref,l0,fzkd@ pOf;pm;cJhအပ်ဆုံး တိုင်းပြည်တွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက တခုအပါအ၀င်ဖြစ်နေလို့ VOA / DZifbm6? ? သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရ မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးပါပဲ။” ရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် မြန်မာစစ်အုပ်စုက မြေမြှုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့ ဘောလုံးအသင်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁,၀၀၀ (၁ ဘီလီယံ)ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာကို ရှင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိတာ ပေးပြီး ၀ယ်ယူဖို့ စဉ်းစားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေမြှုပ်မိုင်းတွေ ဘယ်လောက်ထိရှိသလဲဆိုတာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ မတိုင်ခင်က မြေးဖြစ်သူ တိုက်တွန်းလို့အတိအကျမသိရပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေမြှုပ်မိုင်းတွေ ကျယ်ကျယ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေနဲ့ ငွေပေါင်း ၁ ဘီလီယံဒေါ်လာ အကုန်ခံပြီး မန် ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကို ၀ယ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့တယ်လို့ ၀ီကီလိခ်ပြန့်ပြန်အသုံးပြုနေတာကတော့ သေချာတယ်လို့လည်း Rachel Vin (WikiLeaks) အင်တာနက်စာမျက်နှာ ဖွင့်ချမှုကနေ အဲဒီနှစ် ဇွန်လမှာcent က ပြောပါတယ် အမေရိကန်သံရုံး သံတမန်ကြေးနန်းစာတွေက ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သ “ပြည်သူတွေအပေါ် ဖိနှိပ်နေတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ လူတွေ တင်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။ကိုခိုက်စေတဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်း အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အ ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းကြောင့်လက်တွေကို နိုင်ငံတကာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူပေါင်း ၁၄၀,၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ခံခဲ့ရတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေမြှုပ်မိုင်းတွေကို ဘယ်လို အသုံးပြုနေတယ်၊ ဒီမြေ ကြောင့် ဒီအကြံကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။မြှုပ်မိုင်းတွေကြောင့် ကလေးငယ်တွေအပါအ၀င် အပြစ်မဲ့ အရပ်သား အဲဒီအစီအစဉ်အစား National Football League လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူတွေ သေကျေပျက်စီးနေတာ၊ ဒဏ်ရာရပြီး ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အ အမျိုးသားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို မြန်မာအစိုးရက ထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ပိုင်းတွေစွန့်လွှတ်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာကို ကျမတို့သိပါတယ်။ သိရပါတယ်။DECEMBER 2, 200 Voice of Burma 792 Page 7
Хуан Карлос Беллосо «The role of Territorial Branding in the successful devel...